Yelapa, Jalisco, i-Mexico
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Vereda
I-Vereda idizayini enhle, ehlanganisa imvelo edala izindawo ezamukelekayo nezisondelene. I-oasis yangasese enechibi layo lamanzi ahlanzekile emvelo eduze nomfula, ulwandle kanye nedolobha labo bonke abafisa ukuzizwisa abangasoze bakukhohlwe okuhambisana nemvelo.
I-Abiu iyingxenye noma inhlanganisela yethu ye-Vereda eco lodge. Ingabe kanye nesitayela sefulethi elinethala elivulekile elinosofa loqalo, elinombono omangalisayo phezu kwechibi kanye nezintaba ezishisayo, inezithelo zomvini ezilengayo emafasiteleni.Indlu yokugezela ethokomele emhlophe enamabhodlela ewayini agaywe kabusha odongeni, indawo enkulu inemandala enhle odongeni, umbhede olingana nendlovukazi onenethi lomiyane likakotini, nosofa wokulala.
Sazisa bonke abangase babavakashe ukuthi izehlakalo eziningi ezingalindelekile zivela ngenkathi yemvula kunangezinye izinsuku.Ukushisa, omiyane (okungenzeka udenga), izicabucabu kanye nezinhlobonhlobo zezilwane zasendle. Sitholakala ehlathini ngakho-ke kukhona umsindo wezinyoni, amaqhude nezinkukhu kanye nezinja zasendaweni.Indawo yethu itholakala cishe imizuzu eyi-10 ukusuka ogwini lokuhamba ngezinyawo. E-Vereda ungajabulela imvelo eningi ngakho-ke amaphathi nomculo onomsindo akuvunyelwe.Sinechibi lamanzi omthombo ... ikhishi elivulekile elifakwe kahle elihlotshiswe ngezithombe eziqoshiwe nezimbali ezivela engadini. Ukwazi imininingwane yendawo yethu sonke
4.95(187 okushiwo abanye)
4.95 · 187 okushiwo abanye
I-Yelapa iyidolobhana elihle lokudoba, elingenazo izimoto, nezindawo zokudlela nezitolo konke kungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Ulwandle luyimizuzu eyishumi uma uhamba ngezinyawo.
UJeff uyisakhamuzi sase-Vereda unomphela, uma unemibuzo noma iziphakamiso, sicela umazise.
Ubumfihlo yikona okusikhathaza kakhulu, uma umdinga uzomthola ekuseni ekhishini.
UVereda Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Yelapa namaphethelo